★မြန်မာ့အလင်း★: အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်
ကျနော်တို့ ဆီမှာ ပလီက ခွေးအူသံတွေ ထုတ်လွှင့်ခွင့် ပေးထားပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အိန္ဒိယဘုရားဖူးထွက်ရင် ခက်ခက်ခဲခဲ သွားနေရတဲ့ အချိန်မှာ ကုလားတွေ ဟာဂျီလုပ်ဖို့ ကျနော်တို့ အလံနဲ့ လေယဉ်လွှတ်ပြီး စီစဉ်ပေးနေရပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေ အလှူခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာ ပလီဆရာတွေကတော့ နအဖ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက လစာငွေတွေ ရနေပါတယ်။ အဲလောက်ဦးစားပေးထားတာတောင် အမေရိကန်က ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုပဲ ။ ကျတို့ကတော့ အမေရိကန်အစိုးရ ကို နည်းနည်းလေးမှ ကြည့်လို့ကို မရတာ အမှန်ပါ။
ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မှာ ကျနော်တို့ ထက် အများကြီးရှိတယ်လို့ ပြောထားတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ အခြေအနေကို လေ့လာကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့ ဆီမှာ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်က အမေရိကန် ပြောသလို ဟုတ်ရဲ့လား ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပါ။
တခြားဘာသာ မိန်းခလေးတွေကို မယားငယ်လုပ်နိုင်တဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို ပလီတွေကနေ ဆုငွေပေးပြီး ဘာသာဝင် ပွားများလာအောင် လုပ်နေပါတယ်။ ဒါပမယ့် သူတို့ မွတ်ဆလင်ကို တခြားဘာသာပြောင်းအောင် လုပ်ရင် အင်မတန် ဒေါသထွက်ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရင် လူအပြည့်ကားကြီးတွေ တန်းစီပြီးသွားနေပါတယ်။ Allah ဆိုပြီး အော်နေပါတယ်။ (Allah ဆိုတာ ယောကျား မဟုတ် မိန်းမ မဟုတ်တဲ့ ကောင်ပါ။ ရှုးရှုး ဘယ်ကပေါက်မလဲ သိဝူး) မွတ်ဆလင်တွေစုပြီးလုပ်ရင် ကောင်းတာ လုပ်တာ တစ်ခုမှ မရှိပါ။ အခုကားတန်းကြီးက Sunday school သင်ပေးတဲ့ ခရစ်ယာန် ဆရာမသုံးဦး အမှုကို ကြားနာတဲ့ တရားရုံးစီကို ဦးတည်ချီတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆရာမ ၃ ဦးက သူတို့ ဘာသာဝင် ကလေးတချို့ကို ခရစ်ယာန်ဖြစ်အောင် စည်းရုံးနေတယ်ဆိုပြီး တရားစွဲခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ.. ကျနော်တို့ ဆီမှာ အဲလိုခရစ်ယာန်ဘာသာ စည်းရုံးလို့ နအဖက အဲလိုလုပ်တာ ရှိပါသလား? လူထုကရော အဲလို ကားကြီးကားငယ်အသွယ်သွယ်နဲ့ အငြိုးကြီးကြီး လုပ်တဲ့ လူ့ဘောင်လား?
ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ ခရစ်ယာန်နဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ ထိပ်တိုင် ရင်ဆိုင်နေတဲ့ အချိန်ပါ။ အဖြူနဲ့ အမဲလို သိသာတဲ့ အချက်က မွတ်ဆလင်ဟာ ဘာသာ မဟုတ်ပဲ လူရမ်းကား ၀ါဒဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားစေပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေက တရားသီချင်းတွေ ရွတ်ဖတ်ပြီး အေးဆေးပါပဲ။ ကုလားတွေကတော့ ဟစ်အော်နေတာ ကျက်သရေ တပြားမှ မရှိပါ။
Jihad သမားကြီးတွေရဲ့ ရဲရဲတောက် ဗီဒီယိုပါ။
ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်ရာမှာ ခရစ်ယာန်တွေကို အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ သေဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မွတ်ဆလင် ခွေးတစ်ကောင်မှ တရားစီရင်မခံရပါ (ဗီဒီယိုတွင် ခေါင်းဖြတ်ထားသည့် ပုံပါသည်)
ဒီဗီယိုမှာ မြင်ရသလို ခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရတဲ့ အဖြစ်မျိုး… မြန်မာပြည်မှာ ရှိပါသလား?
Maluku မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းကြည့်ပါ။ စစ်တပ်က မနိုင်လို့ ခရစ်ယာန် ကျောင်းတွေ ဖျက်ဆီးခံရတယ်ဆိုပဲ။ လက်တွေ့ကျသလား? သေနတ်မရှိတဲ့ လူအုပ်ကြီးတွေက ခရစ်ယာန် ကျောင်းတွေကို ဖျက်ဆီးပါတယ်။ လက်နက်အပြည့်နဲ့ စစ်တပ်က ဒီလူအုပ်တွေကို မတားနိုင်ဘူးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်သလား? မီးရှို့ပြာကျတဲ့အထိ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပဲ။ မျက်စိမှိတ်ထားတာ သိသာပါတယ်။
ကဲ.. ကျနော်နိုင်ငံ အခုလောက်အထိ ကုလားတွေကို ဦးစားပေးထားတာတောင် အမေရိကန်က ဘာသာရေး မလွတ်လပ်သေးဘူးဆိုနေပါတယ်။ အမေရိကန် ချီးကျုးခံရအောင် မွတ်ဆလင်ကို အခုထက်ပိုပြီး အခွင့်အရေးပေးရမယ်ဆိုရင် မြန်မာမတွေ အားလုံး ကုလားမယားငယ်ပဲ လုပ်ခိုင်းပါတော့ဗျာ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 1:01 AM
commonce for ur dick-headed writtings.
if the voice from the mosque is kway oo than..then whats the noice call at phone gyi kyaung "a than ma sae kam ma htan pwe" ? kway Oht su lite kyi non-stop Oo than pop naw... khit..khit..khit.. :D
see..when u see front..u need to cover ur ass too!
Non of the pali sayar got salary from thar tha nar yay wun gyi..u lied! muslim has its own associations n community to race relegion funs..they get their salary from there...if u don't know check it first...writing wrong messages is equal u r notatrust worthy guy who give wrong messages.
before u said. american aung bar zay so? no u said..u don't like american again..u r sounding pain in the ass !! khu ta myo ..taw kyar ta myo...yauk kyar mha hote yat lar hin ?
ta charr bar thar win girls tway ko muslim phyit aung lote nai yin pali ga money pay dal so dar lal lone wa..lone wa non-scense.
because even if they try to give money to budhism girls to convert relegion...budhism girls are all above age of 18 are they that idiots to listen easy? they can make their own decisions. well..unless if they are brainless idiot budhism..offcourse they'll bealooser. or they proof as the looser budhism.
if budhism can do better..even muslims will convert to budhism isn't it? now what u saying isaproof of budhisms are looser who can not do better then muslims..nobody notice it until u pointed it out. so now everybody can see that muslim efforts more then lazy budhisms and muslims are doing better then budhism with ur proofs.
budhisms are selfish and never help each others thats the difference with muslims..muslims help each other n succeeding together. thats why people make up their mind to follow the community who help together. this is clear.
why r u jaelousing n doing un-pleasant thing? sick in mind? physcho ? why acting likeapathetic looser?
ko paung ko hlan htaung ya dar .. your war tha nar lar hin?
this website is the proof how budhism are not helpful each other and they pointed how muslims are not only help each other they could even efforts to help others. even compar the skill..muslims can do better.
if going this way..budhism thar tha nar will be gone some day. if they keep doing dirty jobs like this.
at thar ma nya kyaung tite..monks watching x movies, driving lancrewzar cars, smokings n drinking at night, doing prostitution with donation money. finally budhism doing all kind of dirts in their thar tha nar.
make it or break it is all up to u guys.
shame on u acting likeapathetic looser...no way of gentleman! trying to kill others relegion form behind isagay way of doing things.
this website has collected all bad collections to harm on islamic relegion. if muslim wasnt to do it they can collect real vedios of what budhism monks doing its even eaiser but we(muslim) will not do suchalow culture thing..suchalow class thing ..u guys do it ..u proof ur budhism thar tha nar is low class..low culture..thats is!
u wanns win? this kind of works doesn;t work! not enough try...u guys need to work fucking hell harder ! pathetic. dick heads !!
shame on u loosers !!!!!!
thats all u can do ? hahahaaaa
well remember we can do better. u wanna burn thousand of korans? go ahead ? cos millions out there in the world ..but we pity u if u may get tired n got nothing in return. poor pathetic dick heads..thats y keep living asaloosers..go around to stay in muslim countries like malaysia n works as the servants of muslims ...